Wenger oo si cad u sheegay in xiddig ka tirsan Liverpool uu sabab u yahay inay burburto awooda kooxda – Gool FM
Wenger oo si cad u sheegay in xiddig ka tirsan Liverpool uu sabab u yahay inay burburto awooda kooxda
(Liverpool) 19 Feb 2021. Tababaraha halyeeyga ah reer France ee Arsene Wenger ayaanan ka laba labayn inuu muujiyo halka ay ka liidato Liverpool xilli ciyaareedkan, madaama uu u arko in mid ka mid ah heshiisyadii Reds ay sameysay bilowgii xilli ciyaareedkan ay wiiqday khadka dhexe ee kooxda.
Kaddib markii Liverpool ay dhowr bilood kahor shaacisay inay la saxiixatay Thiago Alcantara, taageerayaasha “Reds” waxay lahaayeen rajo weyn, gaar ahaan tan iyo markii Thiago uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu fiicneyd booskiisa Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, rajada taageerayaasha kooxda Liverpool ayaa waqti kaddib waxay isku badeshay niyadjab, sababa la xiriira in Thiago Alcantara uu garoomada kaga maqnaa dhaawac xoogan ee soo gaaray iyo cabuqa Korona Fayras, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed liita kulammadii uu ka ciyaaray horyaalka Premier League.
Waxa ay u muuqataa in la soo saxiixashada Thiago Alcantara ay culeys weyn ku noqotay kooxda Liverpool, taasoo soo bandhigeysa heerar ka fog wixii ay sameysay xilli ciyaareedkii hore.
Haddaba tababarihii hore kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa sheegay in Thiago Alcantara uu wiiqay awooda khadka dhexe ee Liverpool xilli ciyaareedkan, wuxuuna yiri:
“Aniga ahaan, Thiago Alcantara waa dhibaato caadi ah oo heysata tababaraha.”
“Marka aad la soo saxiixato ciyaaryahan farsamo weyn leh, waxaad luminaysaa awooda khadka dhexe waxaadna baabi’ineysaa xoogaa awooda kooxdaada.”
“Mararka qaar rabitaankaaga ah inaad horumariso kooxda waxay u horseedaa in wax xoog leh lagaa qaato.”
Waxaa xusid mudan in Liverpool ay ku jirto kaalinta lixaad ee kala sareynta Premier League iyadoo leh 40 dhibcood, halka Manchester City ay ku hoggaamineyso horyaalka 56 dhibcood.
“Messi waa inuu ka tagaa Barcelona!” Halyeey kubadda cagta Argentina ah